Annaga nagu saabsan - Ningbo Yingyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo yingyi wax soo saarka mashiinka Co., LTD. Waa shirkad ganacsi oo ajnabi ah oo ku hawlan ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta.
Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay qaybaha mishiinnada, Alaabooyinka Hardware, Aluminium Die-casting. zinc die-casting iyo qaybo kale oo bir ah, Qaybaha shaambada, Qaybaha been-abuurka ah, Qaybaha Auto, Qaybaha tareenka, Qaybaha Valve.
MAXAA NOOGU AH?
TECHNOLOGYKA CAGAARAN EE CAGAARAN
FAA'IIDOOYINKA XUMUMAHA LUNTAY
Tignoolajiyada tuurista xumbo ee luntay waxay isku daraysaa moodooyinka balaastiigga ah ee la midka ah qaabka iyo qaabka wax lagu shubayo, oo lagu dahaadhay dahaarka refractory oo la engejiyey, lagu gariiray ciid quartz qalalan, oo lagu shubay bir dareere ah shuruudo gaar ah si loo sameeyo qaabka jawiga heerkulka sare, dareeraha birta waa uumi iyo lysed. Gaaska dillaacsan ayaa lagu sii daayaa iyada oo loo marayo daahan, si birta dhalaalaysa ay u fariisato booska qaabka, iyo habka loo sameeyo dhejinta la rabo ka dib xoojinta iyo qaboojinta, xumbo tuurka lumay, waxaa jira magacyo badan oo kala duwan. Shiinaha, waxaan ugu yeernaa "kabka adag ee ciidda qalalan" ama "kabka is-jiidashada xun", halka USA & Europe ay u bixiyeen "xoojinta xumbo lumay".
Marka la barbar dhigo tignoolajiyada wax lagu shubo ee dhaqameed, tignoolajiyada tuurista xumbo ee luntay waxay leedahay faa'iidooyin aan la qiyaasi karin, sidaa darteed waxaa lagu ammaanay "teknoolojiyadda tuurista ee qarniga 21-aad" iyo "kacaanka cagaaran ee warshadaha aasaaska" ee warshadaha wax tuurista ee gudaha iyo dibadda.
1. Cabbirka tuurista waa mid sax ah oo joogto ah.
2. Dhammaystirka dusha sare ee shubista si siman.
3. Looma baahna qaybaha xudunta u ah ciidda, kuwaas oo si buuxda u wanaajin doona tayada shubista, halka tuurista ciiddu ay leedahay khatarta cilladda wax soo saarka inta lagu jiro samaynta xudunta ciidda iyo hagaajinta tallaabada muhiimka ah.
4. Midna uma baahna caaryada u dhow ama soo saarista caaryada, taas oo si weyn u fududaysa habka qaabaynta oo meesha ka saaraysa ciladaha tuurista iyo alaabta qashinka ah ee ay keento qaadashada caaryada iyo feerka.
5. Qalalan ciid qallalan oo aan lahayn binder, aan lahayn qoyaan iyo wax lagu daro, ciribtirka noocyada kala duwan ee ciladaha tuurista iyo waxyaalaha qashinka ah ee ay sababaan qoyaanka, waxyaalaha lagu daro iyo kuwa isku xidha.
6. Habka daawaynta cammuudda si weyn ayaa loo fududeeyey, waxaana si buuxda dib loo warshadayn karaa oo dib loo isticmaali karaa, taas oo meesha ka saaraysa waaxda diyaarinta cammuudda iyo qaybta daaweynta ciidda qashinka.
7. Ciidda soo dhacda aad bay u fududahay, waxayna si weyn u yaraynaysaa culayska shaqada iyo xoogga shaqada ee ciidda soo dhacaya.
8. Xumbo tuurista luntay waxay leedahay miisaan xasiloon iyo gunno farsamo oo yar, taas oo ka caawinaysa yaraynta miisaanka wax tuurista iyo hoos u dhigida qiimaha marka la barbar dhigo ciid dhaqameedka.